Ukwuu n'anya nke All — njem Lee - Official Site
Onye ọ bụla chọrọ ka a hụ ya n'anya. Ma anyị kweta ya ma ọ bụ, anyị niile nwere a eke ọchịchọ na-eche adored na ekele ndị ọzọ. Ọtụtụ n'ime anyị na-eji anyị dum ndụ ịchọ onye na-ahụ anyị n'anya, na-enwe olileanya na a- onye ọ bụla- ka afọ ju a agụụ n'ime.
Ọma bụrụ na ị na-eme atụmatụ hapụ onwe gị na romance taa na ị na-enwe olileanya na ị ga-emesị gboo agụụ, Achọrọ m ka unu mara na ihe mgbaru ọsọ gị dị oke obere. Ị gaghị ahụ onye kasị ukwuu ịhụnanya nke ndị niile na a kandụl ìhè nri abalị n'abalị. Otú ọ dị, e nwere onye na niile dị ike, niile na-eju afọ, ịhụnanya zuru okè dị gị. E nwere ihe a Chineke na-hụrụ gị karịa ị pụrụ iche n'echiche. Ịhụnanya ya bụ fickle na ị na-adịghị na-woo Ya ma ọ bụ na-arụ ọrụ maka ya.
Otú Chineke Hụrụ Anyị n'Anya?
Amaara m na mgbe ụfọdụ ọtụtụ n'ime anyị na-eche ma ma ọ bụ na Chineke hụrụ anyị n'anya. O yiri nnọọ anya. Ma eleghị anya, anyị ga-akwụsịtụ n'enweghị obi abụọ ma ọ bụrụ na o mere ihe iji mee ka o doo anya maka anyị. The eziokwu anyị, Ọ ugbua nwere. The Bible na-ekwu,, "Chineke na-egosi anyị ịhụnanya ya na na mgbe anyị nọ ka ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị.”
Na ọzọ ọ na-ekwu, "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya, na o nyere ya na Ọkpara, ka onye ọbụla nke kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi.”
Chineke esesịn e gosiri anyị ịhụnanya ya na-apụghị ikweta ekweta ụzọ, site n'inye Ọkpara Ya maka anyị. Ajụla omume ịhụnanya kasịnụ n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa. Ajụla n'anya mkpụrụ obi gị. Kama enweta na ịhụnanya site ịtụkwasị obi na Jizọs.
Ịtachi Obi Ịhụnanya
N'ihi na ndị anyị bụ ndị kweere na Ya,, ọ dịghị ihe dị n'ụwa na nwere ike mgbe ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke. Na ịhụnanya ọ hụrụ ndị mmadụ na-adị ukwuu, na anyị nwere ike mgbe ọ bụla ime ihe ọ bụla iji mee ka ọ hụrụ anyị n'anya karịa Ọ na-ama na-eme.
Ya mere on a Ɛpo Day, -enweta obi fam. Ị na-adịghị anya n'ihu. Chineke hụrụ gị nke ukwuu
Dj más ma ọ bụ Samson • August 19, 2013 na 8:37 Abụ • zaghachi
Ekele Njem Lee ị bụ ezi N'ike mmụọ nsọ ka ndụ m ka Chineke gọzie Ị!!!
Violetchirwa • August 19, 2013 na 8:38 Abụ • zaghachi
Carolyn • August 19, 2013 na 8:38 Abụ • zaghachi
Tru na, nwanne m nwoke. Nice ịhụ esote gen ewere ihe na-akpata. Ka Chineke me ka ókèala gị na mmetụta Ya.
Ka anyị ikpe ekpere maka onye ọzọ dị ka anyị na-achọ irubere Ya.
Kathy Washington7 • August 19, 2013 na 8:38 Abụ • zaghachi
Hụrụ gị n'anya, Triplee!!! Mgbe ị na-comin’ na Port?????
Kayla:) • August 19, 2013 na 8:38 Abụ • zaghachi
hụrụ ya n'anya:)